Iindaba Zomtshato | Eyekhala 2022
Umkhwenyana + Abalindi
Fumana iingcebiso kunye neengcebiso zokuziphatha kumyeni kunye negroommen online kwiKnot.
Umtshato Photography + Videography
lizapourunemerenbleus.org inolwazi oluninzi ngokufota komtshato kunye nevidiyo yemitshato. Fumana owona mtshato ubalaseleyo kwimifanekiso yakho, kwaye uqiniseke ukuba ividiyo yakho yomtshato ithatha usuku lwakho.
Iintyatyambo Hoop Gcina Amakhadi oMhla
Yazisa umhla wakho womtshato ngale ntle ugcine umhla obonisa ifoto yakho yokuzibandakanya. Ihupula eneentyatyambo eziluhlaza kunye neendawo eziluhlaza ezingqonge ibinzana elithi 'gcina umhla' ulandelwe kukugcina iinkcukacha zakho zomhla. Umva wekhadi kubandakanya imvelaphi ethambileyo yamanzi.
Esi simemo somtshato esihle sibonisa i-rustic, ipeyinti eluhlaza emva kwesakhelo sefeksi.
Ukuthumela kunye neMigaqo-nkqubo yoku-odola
Funda ngakumbi malunga nemigaqo-nkqubo yethu yokuhambisa kunye noku-odola. Fumana iimpendulo kuyo yonke imibuzo yakho yokubhala yomtshato, kubandakanya ixesha lokuhambisa kunye nomgaqo-nkqubo wokubuya.
Izimemo zoMtshato weMarble neGolide
Uyilo lwala maxesha olunemibala eqinileyo yesiko kuwe elinomqolo ogqunywe ngomxube wegolide nemarmore.
Umtsalane weCalligraphy Gcina amaKhadi oMhla
Umtshato obhalwe ngobuhle ugcine ikhadi lomhla elimnyama elimhlophe nelomhlophe, kunye ne-calligraphy enkulu esesikweni ngaphezulu kweenkcukacha zomtshato wakho ezibhalwe kumxube we-serifs kunye neepisi. Imvelaphi efihlakeleyo yamaphepha yongeza ubume obubonakalayo beenkcukacha zale mihla.
Luhlaza oluLuhlaza Gcina iiKhadi zomhla
Umtshato ohlaza okomhlaza ogcina umhla oqukethe amasebe e-eucalyptus agubungela amagama akho omtshato. Umva ugqunywe yimigca ethe tyaba ecekeceke.
Amagqabi eRustic Gcina amaKhadi oMhla
Amagqabi e-Rustic agcina imihla enegama lakho lokugcina igama elijikelezwe ziintyatyambo ezintle eziwa kwimvelaphi eluhlaza.
Isundu kunye neProtea Gcina iiPostcards zomhla
Okwangoku gcina umhla weposikhadi obonisa ifoto yakho yokuzibandakanya ngasemva kwebinzana elithi 'gcina umhla' ochazwe kwiskripthi se-calligraphy. Umva wekhadi ubandakanya ukugcina kwakho iinkcukacha zomhla ezigqitywe ligqabi lomthi wesundu.
Okushicilelweyo ngokwaseRoma Gcina iiPostcards zomhla
Umhle gcina umhla wekhadi lokuposa elinophawu olunobunkunkqele lwe-serif olubhangqwe ngomnwe wecrafigraphy omangalisayo ukuseta ithoni yosuku lwakho lomtshato.
Ingca engathath'icala Gcina iiPostcards zomhla
Umtshato ogcina umhla weposikhadi obonisa ukudityaniswa okunqabileyo kweefonti kunye nepeyinti epeyintiweyo kunye neentyatyambo kulwakhiwo oluthe tyaba ngenqaku lomntu kunye neenkcukacha ngasemva.
Izimemo zoMtshato zeMonogram yendalo
Isimemo esihle somtshato sanamhlanje esine-monogram yakho eyeyakho ejikelezwe ziintyatyambo zendalo kulwakhiwo olucocekileyo, kunye nokudibanisa iifonti zale mihla.
Iintyatyambo Ezithulisiweyo Gcina Amakhadi Omhla
Yazisa umhla wakho womtshato ngale gorgeous gcina umhla obonisa ifoto yakho yokuzibandakanya ehonjiswe ziimpawu ezintle zeentyatyambo kunye nokuhlaza. Isikripthi sothando sisetyenziselwa amagama omtshakazi nomyeni.
Isimemo esihle somtshato esineehupu ezimbini zesangqa esigcwele uhlaza oluluhlaza kunye noonobumba bakho bokuqala ngaphakathi kwamakhonkco amahle e-monogram.
I-Watercolor Cactus Izimemo zoMtshato
Uyilo lwesimemo somtshato sango-boho sineempawu zeentyatyambo zamanzi ezenziwe ngecactus, succulents, kunye ne blooms.
indlela yokucheba kakuhle apho
irejista yomtshato yengxowa yomtshato
Wenza ntoni umkhwenyana
Imitshato yokuya e-us
unxibe umtshato omnyama womtshato